Akụkọ Busola Dakolo na Onyeisi ụlọụka COZA | odumblog
posted on Jun. 29, 2019 at 6:00 pm June 29, 2019
Ụbọchị Tọzde iri abụọ na-asatọ nke ọnwa Julai ka Busola Dakolo bụ nwunye onye na-akụ egwu, Timi Dakolo kwupụtara na ụkọchụkwụ nke ụlọ ụka Commonwealth of Zion Assembly (COZA) bụ Biodun Fatoyinbo dinara ya mgbe ọ dị afọ iri na asatọ.
Oriakụ Dakolo bụ onye nke abụọ na-ekwu na Biodun wakporo ya n’ike. Onye nke mbu boro Biodun ebubo a bụ Walter Ese. Busola kwuru na onye ụkọchukwu a biara n’ụlọ ha mgbe mmadu na anọghị n’ụlọ wee dina ya. O kwuputara nke mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ na YNaija. O kwukwara na mgbe ihe a mere na Biodun alụọla nwanyi ma mụtakwa nwa.
Biodun Fatoyinbo na mmeghachi ahụ gbasara ebubo a kwuru na ọ wakpobeghi nwaanyi n’ike kemgbe o jiri mara ihe ma kwuo na ndi ọka ikpe ya ga-ebupu okwu a n’ụlọ ikpe.
Ndi mmadu a ama ama ebuliela okwu a n’igwe Social media. Ndi dịka Adesuwa Etomi, Don Jazzy, Rita Dominic, Daddy Freeze na ndi ọzọ ekwuola na Busola bụ nwanyi siri ike ma na-arịọ ka e kpee ikpe ziri ezi gbasara okwu a. Ha jara Busola ike etu o si pụta wee kwupụta ihe ọjọọ a mere ya.
Ndi Christian Association of Naijiria tinyere ọnụ ha n’okwu a. Ha kwuru na o nweghi ihe ha nwere ike ime banyere okwu a n’ihi na ha anaghị etinye anya ya n’ihe gbasara otu ụlọ ụka si arụ ọrụ ha.
Tags:Biodun FAtoyinboBusola DakoloCaseCozaDon JazzyGossipsNaija celebritiesRapeTimi DakoloVictims
Laghachi ụlọ akwụkwọ ka inweta ezigbo asambodo: Obasanjo